ဟန်းဂုရွာ: ပြောတော့ ဒီမိုကရေစီဆို ၊ လွယ်လွယ်လေး ပြောလိုက်တာပဲ ၊ မြန်မာအစိုးရရဲ့ ဒီလိုမျိုးထုတ်ပြန်ဖို့အတွက် တာဝန်ရှိသူတွေ နဲ့ အလုပ်သမားတွေ ဆွေးနွေးကြပြီးမှ ထုတ်ပြန်သင့်ပါတယ် ၊ ယခုလို ထုတ်ပြန်ချက်ကို အပြင်းအထန် ကန့်ကွက်ပါတယ် ၊
ပြောတော့ ဒီမိုကရေစီဆို ၊ လွယ်လွယ်လေး ပြောလိုက်တာပဲ ၊ မြန်မာအစိုးရရဲ့ ဒီလိုမျိုးထုတ်ပြန်ဖို့အတွက် တာဝန်ရှိသူတွေ နဲ့ အလုပ်သမားတွေ ဆွေးနွေးကြပြီးမှ ထုတ်ပြန်သင့်ပါတယ် ၊ ယခုလို ထုတ်ပြန်ချက်ကို အပြင်းအထန် ကန့်ကွက်ပါတယ် ၊
ကိုရီးယားမှာ EPSနဲ့ အလုပ်သွားလုပ်သူတွေ စာချုပ်ဖောက်ဖျက်ပါက ကျပ်သိန်း၃၀ လျော်ရမယ် ? ? ? ? ?
ပြောတော့ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကို သွားနေကြတယ်ဆို ၊ ကြားလို့မှ ကောင်းကြသေးရဲ့လားဗျာ ၊ အရပ်ကတို့ရေ ၊ ကျွန်တော် အမေစုလာတုန်းက မေးတဲ့ မေးခွန်းလိုပဲ ဖြစ်နေပြီ ၊ နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို ဘာအခက်အခဲတွေ ရှိလဲ ၊ ဘာတွေလိုအပ်နေလဲ ၊ ဘယ်လိုကူညီပေးရမလဲ တော့ မစဉ်စားဘူး ၊ ကိုရီးယားမှာ EPSနဲ့ အလုပ်သွားလုပ်သူတွေ ဘာလို့အလုပ်ရုံတွေကနေထွက်သွားလဲ ၊ သူတို့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ အလုပ်ရုံတွေ မှာ အဆင်ပြေကြရဲ့လား ၊ မေးဖို့မပြောနဲ့ ၊ အကူအညီတောင်းတာတောင် မပေးပါဘူး ၊ အခုလိုမျိုးထုတ်ပြန်ကြေငြာ တာကို ကိုရီးယားမှာရောက်နေတဲ့ EPS စနစ်နဲ့ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုယ်စား လုံးဝကန့်ကွက်ပါတယ် ၊ စက်ရုံမှာ စာချုပ်ချုပ်ပြီး အလုပ်မှာ အဆင်မပြေ ၊ ပြောင်းဖို့လဲ ထွက်စာမပေး ၊ အလုပ်မှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရာရင်တောင် ဆေးခန်းမပြပေးတဲ့ အလုပ်ရှင်တွေ ရှိပါတယ် ၊ “ မင်းတို့ကို ထွက်စာမပေးနိုင်ဘူး ၊ ဒီမှာ အလုပ်ဆက်လုပ်မလား ၊ မြန်မာပြည်ပြန်မလားတဲ့ ” ကျွန်တော်သူငယ်ချင်း ပိုင်ကြီး ကို မေးတဲ့မေးခွန်းပါ ၊ ဒါတွေကို မြန်မာအစိုးရက မသိဘူး ၊ မလေ့လာဘူး ၊ သူတို့ လိုချင်တာပဲ သူတို့ပြောသွားတယ် ၊ တစ်ဖက်သတ် ပြောသွားတာပါ ၊ ပြောတော့ ဒီမိုကရေစီဆို ၊ လွယ်လွယ်လေး ပြောလိုက်တာပဲ ၊ ဒီလိုမျိုးထုတ်ပြန်ဖို့အတွက် တာဝန်ရှိသူတွေ နဲ့ အလုပ်သမားတွေ ဆွေးနွေးကြပြီးမှ ထုတ်ပြန်သင့်ပါတယ် ၊ ယခုလို ထုတ်ပြန်ချက်ကို အပြင်းအထန် ကန့်ကွက်ပါတယ် ၊ နိုင်ငံရဲ့ ၀င်ငွေ တိုးတက်အောင် လုပ်ပေးနေတဲ့ သူတွေဆိုတာလဲ မမေ့ကြပါနဲု့
credit to - စိုးမိုးသူ
Posted by ဇော်မင်း(ရွှေအလင်းတန်း) at 9:42 PM
Labels: ပြည်တွင်းသတင်း, အလုပ်ခွင်ရေးရာ, မောင်းသတင်း
ဖေါက်ဖျက်ရင်လဲ ကျပ်သိန်း ၃၀ လျှော်မယ်။ မြန်မာအလုပ်သမားတွေကိုလဲ (၃)နှစ်စာချုပ်နဲ့ လာမခေါ်ဘဲ (၁)နှစ်စာချုပ်နဲ့ပဲ ခေါ်ဖို့ ဒီကောင်တွေကို ပြန်ညှိနှိုင်းခိုင်းလိုက်ဗျာ။ ။